Human Resource Development - Department of Research and Innovation (DRI)
လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ပြုစုပျိုးထောင်မှု ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ အခြေအနေများ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင် လေ့ကျင့်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြန်ပြည့်မြဲ စွမ်းအင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ပေးရန်၊ နည်းပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးလက်ဒေသ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျော့ချရေးစသည့် အစိုးရ၏ မူဝါဒကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်သင်တန်းဌာနကို အောက်ပါအတိုင်း ဌာနခွဲ(၄)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-
တစ်လသင်တန်းဖြစ်ပြီး ဆက်တိုက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား များကို သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရာ၌ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင် သုတေသနဌာနနှင့် အခြားအထောက်အပံ့ ပေးသော ဌာနခွဲများမှ မကြာသေးမီက ဖွဲ့စည်းထားသောအခန်းများနှင့်လက်တွေ့ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ဤသင်တန်းမှ တပ်ဆင်၊ ထိန်းသိမ်း၊ အသုံးပြုလည်ပတ်ခြင်းနှင့် တီထွင်မှုစသည့် အသိပညာ၊ နည်းပညာများ ကို စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပေး ပါသည်။ သင်တန်းမှ အောက်ပါဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိ ပါသည်။
(ခ) လေ စွမ်းအင်နည်းပညာနှင့်လက်တွေ့အသုံးချသင်တန်း
(ဂ) ရေအားလျှပ်စစ် နည်းပညာနှင့်လက်တွေ့အသုံးချသင်တန်း
(ဃ) စပါးခွံလောင်စာဓာတ်ငွေ့ထုတ်စက် နည်းပညာနှင့်လက်တွေ့အသုံးချသင်တန်း
(င) ဇီဝဒြပ်ထု စွမ်းအင်နည်းပညာနှင့်လက်တွေ့အသုံးချသင်တန်း
Objective of Renewable Energy Training Centre
The main purpose of opening renewable energy training centre (RETC) is to contribute knowledge, special skill and to come out technicians in renewable energy fields. Moreover, it is to provide in government policy that is supporting electricity and eliminating poverty in rural areas.
Organization of Renewable Energy Training Centre
Renewable Energy Training centre will be organized by the following four sections:
Biomass Energy Section
It is one month training course and instantly started to open. In this training, the trainees will be taught by using recent fabricated units and equipments from renewable energy research department and supporting department. This training will give the knowledge and technologies of fabricating, installing, operating and maintenance in theoretically and practically. This training has been contributing the following courses:
Technology and Application of rice husk gasifiercourse